Iindaba - Ukufuduswa kwezindlu ezisemaphandleni yenye yeeprojekthi zophando zesakhiwo sentsimbi yokuhlala
Indawo yokuhlala yesakhiwo sentsimbi kukusebenza kwenyikima yasemaphandleni, ixesha elifutshane lokwakha, inqanaba eliphezulu lokushishina, ukonga umbane, ukuphinda kusetyenziswe kwakhona, njl., Ngokuhambelana nomgaqo wophuhliso lwesizwe oluhlaza kunye nolwakhiwo lomgaqo-nkqubo wolondolozo lwemithombo yoluntu.
"Ukufuduswa kwezindlu ezisemaphandleni yiprojekthi yophando ngendlu yentsimbi"
Izakhiwo zentsimbi kwiindleko ezidityanisiweyo kufutshane nexesha kunye nomthwalo ziya kuncitshiswa malunga nesinye kwisithathu. Ngokukodwa iimeko zendalo ezihlwempuzekileyo zasemantla ntshona, ubume bentsimbi kulwakhiwo lokuhlala aluyi kuba njengezakhiwo zemveli ezisengozini yemozulu, okoko nje umzi-mveliso ukwenza izinto eziyimfuneko, emva koko ukhethe ixesha elifanelekileyo lokwakha elinokufakwa- indawo.
Ukukhawulezisa uphuhliso lolwakhiwo lwentsimbi kukukhuthaza ukuguqulwa kunye nokuphuculwa kweshishini lokwakha ukufezekisa ukuphuculwa kweshishini lokwakha yinto ebalulekileyo yokwetyiswa kwesinyithi somthamo ogqithisileyo, ukuyilwa kobuchule bokubambisa intsimbi kwinqanaba elibalulekileyo. Ukufuduswa kwezindlu ezisemaphandleni yenye yeeprojekthi zophando kubume bentsimbi.
Okwangoku, iphuhlise kwaye yayila i-90 yeemitha zesikwere ukuya kwi-300 yeemitha zesikwere zezindlu zentsimbi kumantla ntshona, umzantsi-ntshona wengingqi kunye nolwakhiwo olutsha lwasemaphandleni. Iphuhlisiwe ukusuka kulwakhiwo, ukugcinwa, umgangatho kunye nokudityaniswa. Uqoqosho luyayilondoloza indalo kwaye luyakhawuleza. Inyathelo elilandelayo kulwakhiwo lophando lolwakhiwo lwentsimbi kunye nophuhliso, uphuhliso lwenkqubo entsha kunye nobuchwephesha bokwakha ngaxeshanye, uGansu loTyalo-mali loKwakha luza kubakho ngo-2016 eGansu Investment Construction Investment New District 100,000 square metres zezindawo zokuhlala ezizimeleyo. Iiprojekthi zonke zisebenzisa ulwakhiwo lwentsimbi, ngokwenza oko ukuhlanganisa amava, ukwenzela ukuqhubela phambili ukukhuthaza ishishini lezindlu zentsimbi ezisemaphandleni.
Umbane we-Angle Steel Towers, Ulwakhiwo lweZakhiwo zentsimbi, Ulwakhiwo Tube Steel, Inqaba kaMasipala yoNxibelelwano, Umbane weNsimbi yeNqaba yombane, I-Angle yentsimbi yokuThutha amandla eNqaba,